Bangiga Dibadda - Hordhac fudud oo loogu talagalay bilowga ah
Meel ka baxsan Bangiga Tilmaanta bilowga ah
Bangiga dibedda waxaa loola jeedaa inaad ka furato koonto bangiga dalka aadan degenayn. Sababaha loo furayo akoonnada dibedda waxaa ka mid ah ilaalinta hantida, ballaarinta ganacsiga, iyo, xaaladaha qaarkood, dhimista canshuurta.
Adduunyada dacwadaha sii kordhaya ee kuwa raba inay gacmahooda ku helaan lacagta adag ee aad shaqaysatay, bangiyada badda ayaa lagu daray xeebaha. kalsoonida ilaalada hantida waa mid ka mid ah qaababyada ugu waxtarka badan ee lagu ilaaliyo lacagtaada, loo ilaaliyo hantidaada, loona caawiyo kobcinta maalkaaga.
Laakiin waxyaabaha ugu horreeya marka hore: bangiyo shisheeye ma sharci baa?
Haa. Sida laga soo xigtay Investopedia, Bangiga dibedda laga isticmaalo waa sharci dhammaystiran, illaa intaadan isku deyin inaad lacag ka qarsato mas'uuliyiinta canshuuraha. Dadka qaar waxay moodayaan inay ka baxsan karaan canshuuraha iyagoo furaya koonto meel ka baxsan ah. Si kastaba ha noqotee, Sharciga Ku-Dhaqanka Canshuuraha ee Shisheeyaha (FATCA) wuxuu u baahan yahay bankiyo shisheeye inay soo sheegaan isu-dheellitirka iyo howlaha bangiyada ee muwaadiniinta Mareykanka u diro IRS.
Si loo caddeeyo, bangiga dibedda laga leeyahay micnaheedu waa inaad ka furatay koonto bangi waddan kale. In kasta oo, habka oo dhan aad uga fudud yahay sidaad u malaynaysid. Bangiga aad dooratay xitaa waa inaanay noqon “mid xeebeed,” taas oo war wanaagsan u ah kuwa kashaqeynaya Kanada. Sidoo kale, maahan inaad taajir noqotid inaad akoon ka furato meel ka baxsan. Bangiyada dalal kale waxay dejistaan ​​akoonkooda ugu yar. Marka waxaad awoodi kartaa inaad ku bilowdo koonto yar sida in yar oo kun oo doolar.
Shuruudaha aasaasiga ah ee lagu furayo Xisaabta Bangiga ka baxsan
Si la mid ah furashada akoon bangi magaaladaada, bangiyadaha dibedda ee ka baxsan waxay u baahan doonaan macluumaadkaaga. Marka lagu daro magacaaga, cinwaankaaga, iyo taariikhda dhalashadaada, bangiyada dibedda waxay kaloo wax ka weydiin doonaan arrimaha ku saabsan dhalashada iyo shaqada. Dukumiintiyada cadeynaya macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa ka mid noqon kara nuqulada baasaboorkaaga, laysanka darawalnimada, ama dukumiintiyo aqoonsi oo kale oo ay dowladdu soo saartay. Bangiyadu sidoo kale waxay rabaan inay hubiyaan cinwaankaaga jir ahaaneed ujeeddooyin aqoonsi, sidaa darteed waxaad u baahan kartaa inaad soo bandhigto biil adeegsi.
Dokumentiyo xaqiijin dheeraad ah
Marka lagu daro aqoonsiga iyo dukumintiga deganaanshaha, bangiyadaha dibedda ee xeebta ku teedsan waxay badanaa u baahan yihiin dukumiinti xaqiijin ah oo la siinayo dadka laga yaabo inay isku dayaan inay furaan koonto sababao xun (lacag sharci darro ah, khiyaano canshuur, iyo wixii lamid ah).
Marka hore, waxay rabaan tixraacyo dhaqaale oo muujinaya inaad xiriir wanaagsan la leedahay baankaaga hadda jira. Waxay uga baahan doonaan warqad tixraac oo ka socota bangigaaga hadda sida caddeyn ah “xiriir wanaagsan oo qanciya”.
Marka labaad, bankiyo badan ayaa raba inay ogaadaan noocyada macaamil ganacsi lacageed ee dhici doona, halka lacagtu ka timid, iyo in si sharci ah lagu soo qaatay. Tani maaha inay ahaato mid been abuur ah. Sababtoo ah bangigu wuxuu lahaan karaa kumanaan macaamiil ah. Haddii hal macmiil uu haysto lacago sharci darro ah oo lagu dhex marayo hay'adda, maamulayaasha waxay ku soo rogi karaan ganaax bangiga, ka noqon karaan ruqsaddooda iyo / ama xiri karaan shaqaalaha masuulka ka ah.
Dukumentiyada xaqiijinta ee loo baahan yahay xaaladdu way ku kala duwanaan doontaa. Tusaale ahaan:
Lacagta ma laga keenay shaqadaada? Hadday sidaas tahay Bixi nuqul lacag bixin ahstub loo shaqeeyahaaga.
Hadday lacagtu ka timid dakhliga maalgashiga, keen macluumaad ku saabsan maalgashigaaga.
Lacagta ma laga keenay ganacsi ama iibsi hanti ma guurto ah? Markaa waad awoodaa keen qandaraasyo iib ah ama dukumiintiyo kale oo muhiim ah.
Hadday lacagtu ka timid qandaraas caymis, sii warqad ka socota shirkadda caymiska.
Hadday lacagtu ka timid dhaxal, Bixiso warqad ka socota howl wadeenka guryaha.
Mar labaad, baanku waxay weydiiyaan su'aalahan maahan sababta oo ah inay yihiin faragelin. Way weydiiyaan sababta oo ah qawaaniintu waxay u baahan yihiin xaqiijinta noocan ah. Marka la xisaabtamo, haddii uusan haysan dukumiintiyada taageeraya ee loo baahan yahay waxaa ku dhici doona ganaax adag. Xadgudubyo badan ayaa sababi kara lumista shatiga. Si kale haddii loo dhigo, qofka baaraya dukumiintiga ayaa waayi doona shaqadiisa haddii ay ka gaabiyaan jid-gooyo markii ay furayaan koontadaada. Marka, ha ka fileynin inay sameeyaan waxyaabo ka reeban.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka bangi-dibadeedka waa kartida aad ku dooran karto lacagta aad ku xareysatid lacagaha. Astaantan ayaa si gaar ah qiimo u leh si loo fuuli karo koritaanka lacagaha. Dadka qaar waxay jecel yihiin inay u isdhaafsadaan isbedelka u dhexeeya sicirka sarrifka lacagaha qalaad si looga dhigo koboca maalgashiga.
Dhawr waxyaabood oo maskaxda lagu hayo:
In kasta oo aad uga faa'iidaysan karto in aad dulsaar ka hesho dhigashadaada lacag kale, waxa kale oo aad yeelan kartaa waajibaad cashuureed oo shisheeye.
Haddii aad ubaahantahay inaad isweydaarsato lacagaha si aad u sameysid dhigaal iyo kala sooc, waad dhameysan kartaa bixinta lacagaha sarrifka iyadoo ku xiran cadadka ay hay’aduhu ku soo oogaan iyo sicirka sarrifka.
Sameynta dhigaalka ugu horreeya
Shuruuda ugu dambeysa ee furitaanka akoon bangi meel ka baxsan waa in la sameeyo dhigaalka ugu horreeya. Inta badan akoonnada bangi ee laga isticmaalo badda waxaa lagu maalgeliyaa wareejinta taleefannada maadaama jeegagga gudaha aan guud ahaan laga aqbalin xukunka shisheeyaha. Ku dhowaad dhammaan bangiyada gudaha iyo dibedda waxay qaadaan khidmadaha wareejinta taleefannada caalamiga ah. Khidmadaha way kala duwan yihiin bangi ilaa bangi. La-taliye dhaqaale ayaa kaa caawin kara inaad eegto heshiisyada ka hor intaadan dooran bangi oo aad hubiso in dhammaan dukumiintiyada xaqiijinta iyo waraaqaha ay yihiin kuwo nidaamsan.
Sababaha 4 ee Sare Sababaha loo Furayo Xisaab Bangi Dibadeed
Hadda oo aad ogtahay aasaaska furashada akoon bangi ee dibedda, waa kuwan afar sababood oo waa inaad ugu wacan tahay!
Sida laga soo xigtay Aasaaska Waxbarashada Dhaqaalaha Mareykanka (USFEF), Mareykanka wuxuu leeyahay qareenno gaaraya 1 milyan. Intaa waxaa dheer, qiyaastii 40 milyan oo dacwooyin ayaa la gudbiyaa sanad walba. In kasta oo aysan jirin wax sidan oo kale ah oo ah ilaalinta hantida '100%', meel ka baxsan xeebta Koontada akoonku waxay ka ilaalin kartaa hantidaada inay qaboojiso qulqulka qareenka gardarada ah (awoodaha soo koobiddu ma gaari karaan meel ka baxsan Mareykanka) iyo dacwadaha qirashada ah. Adduunkan qancisa dacwadaha, lahaanshaha akoon bangi oo ka baxsan xeebaha ayaa gacan ka geysan kara lacagtaada meel aan la gaarin. Kani wuxuu shaqeynayaa muddada dheer, si kastaba ha noqotee, markii aad akaawnkaaga ku hayso aalad ilaalin hanti sida ceymiska xeebta ee LLC iyo / ama aaminaada ilaalinta hantida.
Nidaamyada bangiyada Sounder
Bankiyada oo dhan looma abuuro sinnaan. Dhab ahaan, Maaliyadda Caalamiga ah's Liisaska ugu dambeeyay ee “Bangiyada Adduunka ee ugu safarka badan” waxaa ku jira oo keliya shan bangi oo Mareykan ah (booska ugu sareeyay wuxuu ahaa #38). Kuwaas liiska ku jira, US Bancorp (#49) ayaa ah ciyaaryahanka kaliya ee weyn halka afarta kale ay yihiin bangiyo ku saleysan beeraha.
Bangiyada dalal badan oo reer galbeed ah ayaa gacanta ku haya qayb yar oo kaash ah si ay ula kulmaan codsiyada bixitaanka macaamiisha. Marka, haddii ay dhacdo dhacdo Lehman kale oo nooc ah, waxaad dhib ku yeelan kartaa helitaanka lacagahaaga. Bangiga dibedda ee ku yaal xukunka leh deyn hoose iyo taariikh deganaansho ayaa kaa caawin kara ilaalinta kaydkaaga iyo yareynta ku tiirsanaantaada hal hay'ad maaliyadeed.
Qiimaha dulsaarka sare ee dhigaalka
Qiimaha dulsaarka hooseeya ee koontada keydka waa mid ka mid ah sababaha ugu caansan ee dad badani u leexdaan bangiyo shisheeye. In kasta oo Fed uu u adeegsaday sicirka dulsaarka una dhow hoos udhac taariikhi ah, qaar ka mid ah bangiyada ajnabiga waxay bixiyaan heerar dulsaar ah 7% ama ka badan. Markaad raadsato ikhtiyaarada ka baxsan dalkaaga hooyo, waxaad ka heli kartaa bangiyo bixiya dulsaar aad u sareeya oo ka badan kan deegaankaaga lagu aasaasay.
Waa lacagtaada, marka helitaanka fursado badan oo ku saabsan sida loo badbaadiyo had iyo jeer waa wax fiican. Koontada bangi ee dibedda waxay ku siisaa dabacsanaan muddo dheer ah, oo kuu oggolaaneysa inaad:
Ijaarato ama iibsato hanti dal shisheeye ah
Hubso helitaanka daryeelka caafimaad ee dibada
Kordhiso halista ku jirta galkaada waraaqaha boosta adiga oo haysta lacagaha qalaad
Ku ilaali asturnaantaada akoonnada shisheeye wadarta guud ee ka hooseysa $ 10,000
Faa'iidooyinka bangiga xeebta ayaa waliba ku siin kara xasilooni aad loogu baahan yahay. Xisaabaadka bangi ee dibedda wuxuu kaa dhigayaa bartilmaameed adag oo ah dacwadaha macangagnimada ah wuxuuna kaa ilaaliyaa bangiyada aan fiicnayn iyo khataraha imaan kara (sida kicitaanka ama is-biirsashada) ee dowladda dalkaaga.
Waxa laga raadsado Banki Dibadeed
Marka, astaamo noocee ah ayaa u samaynaya bangiyo fiican oo laga isticmaalo baddaha? Aynu eegno!
Deganaanshaha awooda iyo tayada
Waxa ugu horreeya ee tixgelinta la siinayo marka la dooranayo bangi dibadeed waa tayada awoodda xukunkeeda. Su'aalaha qaarkood waa inaad tixgelisaa:
Dalku dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan ma deggan yahay?
Waa maxay nooca asturnaanta ama sharciyada amniga jira?
Awoodda maammulku ma ganacsi baa?
Maaliyad ahaan iyo sumcadda baanka ayaa ah tilmaamayaal muhiim ah oo lagu go'aaminayo inaad ku aaminto lacagtaada. Bangiyo badan ayaa gacanta ku haya wax ka yar 1% dhigaalka gacanta halka bangiyada kale laga yaabo inay hayaan ilaa 24%. Xirfad-yaqaanka arrimaha dhaqaalaha ayaa kaa gargaari kara bixinta aragtiyo ku saabsan sumcadda guud ee bangiga. Fadlan buuxi foomka wadatashiga ee boggan ama isticmaal mid ka mid lambarrada taleefannada ee kore.
Haddii aad furayso koonto bangi oo dibedda ah, fursadaha aad ayey u yar yihiin (haddiiba ay jiraan) ee macaamil-xawaaladdaaga ayaa shaqsi ahaan loo qabanayaa. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay bangi leh siyaasado iyo adeegyo ku habboon hab-nololeedkaaga caalamiga ah. Bangiga dibedda ee joogtada ah waa inuu siiyaa habsami u socodka furitaanka akoon, bangiyada qadka la isku halleyn karo, ugu yareynta deebaajiga la awoodi karo, iyo adeegga macaamiisha wanaagsan. Adeegsiga ATM fudud iyo khidmadaha caalamiga ee hooseeya ayaa sidoo kale faa'iido yeelan doona.
5 Wadammada Banki-Bixiyeyaasha ugu Fiican
In kasta oo ay jiraan xulashooyin badan oo ka baxsan goobaha bangiyo shisheeye, dalalkan 5 waxay ka taagan yihiin dadkii badnaa.
Jasiiradaha Cayman waa meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaaliyo daacadnimadaada dhaqaale. Had iyo jeer dooro caan ah oo loogu talo galay bankiyo xeebaha, Jasiiradaha Cayman waxay caan ku yihiin inay noqdaan goob canshuur bixinaysa oo wax yar siisa canshuur lagama qaado shaqsiyaadka shisheeye iyo ganacsiyada. Ma jiraan wax canshuur ah oo laga helo waxqabadka raasamaalka, hantida, dakhliga, shirkadaha, haynta, ama bixinta mushaharka iyo xakamaynta isweydaarsiga, taas oo u oggolaaneysa in si lacag la’aan ah lacag loogu wareejiyo lacag kasta oo gasho iyo dibedda jasiiradaha ah. Jasiiradaha Cayman waxay sidoo kale leeyihiin qodobo sir ah oo adag oo ilaaliya asturnaanta maalgashadayaasha. Maskaxda ku hay, si kastaba ha noqotee, in Mareykanka uu canshuur ka qaado muwaadiniinteeda daqliga adduunka iyadoo aan loo eegin halka lacageedku ku yaallo.
Hadaad raadineysid ilaalinta hantida ugu badan, markaa bangiga Switzerland ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican. Switzerland gudaheeda, adeegyada bangiyada waxaa lagu soo daray nooc nooc takhasus dhaqaale ah qaanuun ahaan. Xaqiiqdii, sharcigu wuxuu ka mamnuuceyaa bankaaga inay siidaayaan wax macluumaad ah oo ku saabsan akoonkaaga adoo aan ka haysan ogolaanshahaaga. Swiiserland sidoo kale waxaa loo arkaa mid kamid ah maalgashiga amni ee ugu wacan nidaamka dhaqaale ee xasiloonida wadanka. Intaas waxaa sii dheer, dhammaan bangiyada waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan heerka ugu hooseeya ee raasumaalka si loo hubiyo in macaamiisha la siiyo si buuxda haddii ay dhacdo in bankigu ku xumaado.
Meel kale oo xasilloon, oo aamin ah oo lagu abuuri karo koonto bangi meel ka baxsan waa Singapore. Sameynta koonto halkan waa sahlan tahay (looma baahna safar dibadda ah, inta badan kiisaska) waxaana jira xeerar adag oo bangiyada lagu hubinayo ilaalin adag ee maalkaaga. Singapore ayaa sidoo kale caan ku ah bixinta fududeynta maalgashiga aqoonta sare leh iyo maareeyayaasha maaliyadeed si ay uga caawiso hubinta maalgashi faa'iido leh. Iyada oo leh adeegyo maareyn kaladuwan oo kaladuwan, noocyo ganacsi oo kala duwan, tikniyoolajiyada goynta, iyo helitaanka akoonnada lacago fara badan oo kala duwan, Singapore ayaa noqon karta meesha ugufiican ee koontadaada dibedda.
Aynu hore u sheegno, Jarmalku wuxuu fuliyaa xukunnada shisheeye. Marka, waxaad u baahan kartaa inaad meel kale raadsato haddii ilaalinta hantidaadu tahay hadafkaaga ugu weyn. Taasi waxay tidhi, wsi aan macquul ahayn loo arkaa mid ka mid ah Meelaha ugu amaanka badan aduunka si lacagtaada loo ilaaliyo, Jarmalka waxay macaamiisheeda siisaa adeegyo maaliyadeed oo sarreeya. Xaqiiqdii, Jarmalka ayaa buuxinaya 3 ee ka sarreeya dhibcaha 5 on Maaliyadda Caalamiga ah's liiska ugu dambeeyay ee bangiyada adduunka ugu ammaansan (#1, #3, iyo #4). Iyaga oo kaashanaya xasilloonida dhaqaale ee dalka, Bangiyada Jarmalka ayaa ah meel aamin ah oo maalgashi lagu sameeyo, iyagoo bixiya xasillooni dhaqaale iyo qawaaniin amni oo aan laga helin waddamada kale. Faa'iidooyinka qaarkood waxaa ka mid ah helitaanka fudud ee bangiyada tooska ah iyo adeegyada ATM, furitaanka akoon yar iyo kharashyada dayactirka, iyo xulashooyinka furitaanka Visa ama MasterCard.
Markaad furato koonto bangi oo ka baxsan Belize, waxaad la kulmi kartaa qaar ka mid ah ilaalada ugu fiican iyo maalgashiga maalgashiga ee laga heli karo warshadaha. Bilowga, bangiyada kasta oo ku yaal Belize waa inay lahaadaan a Heerka dareeraha 24% sharci ahaan. Marka la barbardhigo, bangiyada Mareykanka waxaa kaliya laga rabaa inay lahaadaan heerarka dareeraha ah ee 5%. Taas macnaheedu waa in, qiyaastaas, bangiyada Belizean waxay ku dhow yihiin 4 jeer oo ay ka yar tahay inay ku dhacaan. Bangiyada ku yaal Belize sidoo kale waxay leeyihiin celcelis ahaan heerka ugu sareeya dulsaarka adduunka. Ma jiraan canshuur maxalli ah ama xannibaadaha xakamaynta isweydaarsiga ee koontada caalamiga ah, iyo ilaalin qarsoodi ah oo adag.
Haddii aad rabto inaad ballaariso faylalkaaga, aad ballaadhiso fursadahaaga maalgashi, ama aad si fudud u hesho meel aamin ah oo aad ku kaydiso kaydkaaga, bangiyada badaha ayaa laga yaabaa inay tahay xalka ugu habboon. Adiga oo kaabayaya ikhtiyaarada faraha badan ee halkaa ka bixi kara waxay u muuqan karaan wax laga naxo, sidaa darteed la xiriir mid ka mid ah la taliyayaasheena qibrada leh si aad u hesho kubbadda. Waxaan kaa caawin doonnaa inaad go’aamiso baanka bangi ee kugu habboon adiga oo kugu socodsiin doona nidaamka oo dhan si loo hubiyo natiijada ugu wanaagsan. Waxaan sugeynaa inaan kula shaqeyno, marka fadlan na soo wac maanta.